ให้เช่าคอนโดthe Rhythm รัชดา คอนโดหรู ตกแต่งเสร็จพร้อมเข้าอยู่ | DDHomeLand
โดย ธีรัตม์์ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 พ.ย. 2555.
พื้นที่ 45 ตร.เมตร ตึก B ชั้น9ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องนั่งเล่น 1 ห้องครัว แอร์2เครื่อง TV LCD2เครื่อง เครื่องทำน้ำอุ่น ตู้เย็น เตียงนอนขนาด6ฟุต พร้อมตู้เสื้อผ้าบิวอินท์ ตกแต่งเสร็จพร้อมเข้าอยู่
ชั้น5: สระว่ายน้ำ, สวนสาธารณะ, ฟิตเนส ชั้น 32: สระว่ายน้ำ, สวนสาธารณะ, ฟิตเนส, ซาวน่า
ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, key card, double key lock, กล้องวงจรปิด CCTV, ลิฟท์4ตัว, ที่จอดรถ
ติดสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีรัชดา
อยู่ใจกลางศูนย์กลางธุรกิจย่าน รัชดา อโศกและลาดพร้าว
ใกล้ห้างสรรพสินค้า Fortune, Esplanard, Robinnson, Big C, Lotus, เซ็นทรัลลาดพร้าว
**** ราคาเช่า 23,000 บาท (สัญญาขั้นต่ำ 1 ปี) ****
ดูรูปเพิ่มเติม : http://www.reaphouse.com/product/730976/ให้เช่า-คอนโด-theRhythm-รัชดา-คอนโดหรู.html
ติดต่อ: ธีรัตม์์ อีเมล์:
ต้องการ: เช่า ราคา: 23,000/เดือน
โทรศัพย์: 0839929992,0814453540 จังหวัด: กรุงเทพ
คำค้น: คอนโดหรู | คอนโดให้เช่า รัชโยธิน | rhythm รัชดา ดี มั้ย | အပြာရပ်ဝန်း | ကာမ ဖေကြီး | ​ဆေး​ကျောင်း-HD ဆေး ကျောင်းအတွဲ | ခွေးbeeg | မြန်​လိင်​ကြီး​ဆေး | ​ဆေး​ကျောင်းhd | ​စောက်​ပပ်​ |
ဒေါက်တာချက်ကြီး ရုပ်ပြ ဖေဖေ မမ အောစာအုပ် ဖေဖေ မမ အောစာအုပ် အာသာဖြေတော့ အာသာပြေ ဒေါက်တာချက်ကြီး ရုပ်ပြ ဖေဖေ မမ အောစာအုပ် ဖေဖေ မမ အောစာအုပ် အာသာဖြေတော့ အာသာပြေ သဇင် ညမင်းသား ​​ရုပ်​ပြ​အောစာအုပ်​ beeg ပါကင် သဇင် ညမင်းသား beeg ပါကင် ​​ရုပ်​ပြ​အောစာအုပ်ုမြန်​ပြာကား တရုတ်​​အောစာအုပ်​ အော်စာအုပ်blogger တရုတ်​​အောစာအုပ်​ အော်စာအုပ်blogger ​စပတ်​လိုးစာအုပ်​ ​စပတ်​လိုးစာအုပ်​ အပြာစာအုပ် အပြာစာအုပ် ဖင်​လိုကား ဖင်​လိုကား ဒေါက်တာချက်ကြီး blogger ရတနာဝင်းထိန် အပြာစာအုပ်များ အကိတ်​မ ဒေါက်တာချက်ကြီး blogger ရတနာဝင်းထိန် အပြာစာအုပ်များ အကိတ်​မ အပြာစာအုပ်​2000 အပြာစာအုပ်​2001 အောစာအုပ် အောစာအုပ် အပြာစာအုပ်​2000 အပြာစာအုပ်​2001 ကိုတုတ် မြန်မာအပြာစာအုပ် blogger မြန်မာအပြာစာအုပ် blogger